I-China Isitolo sesitolo esidayisa izinto esidayisa kalula kubakhiqizi nabaphakeli | UZhengcheng
I-acrylic swatch ene-high-saturation inemibala egqamile, ilogo egobile, nokubukeka okuhle okushiya isithombe esihle somkhiqizo kumakhasimende. Ukukhanya okuphezulu kwethubhu eholelekile kukhanga kakhulu ebusuku futhi kudonsela abathengi abangaba khona.
Igama lomkhiqizo: Thenga ibhokisi lesibani esingaphambili
1. Uphawu lwesitolo lukaYonghui lusebenzisa umklamo ongenalutho engxenyeni yelogo. Sifaka ibhodi lombala le-acrylic kumshini wokuqopha oqeqeshiwe wokuqoshwa, futhi uphawu lokugcina olwenziwe nge-chestnut lwamanzi luhlukile futhi luhle.
Ipuleti yombala we-acrylic nemichilo yombala ye-acrylic inamathele ngesandla ebhokisini lokukhanya. Alikho igebe phakathi kwesiqeshana sombala we-acrylic nomzimba webhokisi, ngakho-ke awunamanzi futhi awunazintuli, futhi kulula ukuwuhlanza. Ukusetshenziswa kweminyaka engu-3-5 ngeke kuthinte umphumela wokusetshenziswa nokugqama kophawu lwesitolo.
3. Lapho izimpawu zebhokisi elikhanyayo zifakiwe ezinhlangothini zombili zesitolo, ibhokisi elikhanyayo lasekhoneni lingasetshenziswa ekuhlanganeni kwamabhodi amabili, okuyinto yemvelo futhi yinhle.
ISichuan Zhengcheng Starlight Energy-saving Technology Co, Ltd. itholakala eChengdu, China, namahhovisi eBeijing naseWuhan, eChina. Kungumkhiqizi ogxile ekukhiqizeni amabhokisi wokonga ugesi wamandla ezitolo ezilula. Kusukela yasungulwa eminyakeni engu-6 eyedlule, inkampani ithole amalungelo obunikazi amane kuzwelonke embonini yesitolo esilula yokukhiqiza ibhokisi. Inkampani yethu inefektri yobungcweti enendawo engamamitha-skwele angama-4,200 namabhokisi wokukhiqiza amabhokisi amane akhanyayo. UZhengcheng manje ukhonza ngaphezu kwe-100 brand eChina futhi ukhiqiza amamitha angaba ngu-30,000 wamabhokisi wokonga ugesi ngamandla ngonyaka.
Langaphambilini Ukukhangisa kwe-Acrylic okusindisa amandla ibhokisi lezimpawu
Olandelayo: Izimpawu zokukhangisa ze-acrylic ezingaphandle kwamanzi
I-Pharmacy Signboard, Izimpawu Ezikhanyisiwe, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, I-Blister Light Box Signboard, Izimpawu Zokukhangisa,